घर बनाएर चलाउन नसक्ने बाबुराम र घर चलाउन सक्ने उपेन्द्रको कस्तो छ भविष्य?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
घर बनाएर चलाउन नसक्ने बाबुराम र घर चलाउन सक्ने उपेन्द्रको कस्तो छ भविष्य?
डिसी नेपाल , २६ बैशाख २०७६
कम्युनिष्ट विचार धारा त्याग गरेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका डा. बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच एकता भएपछि अहिले राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको छ।
डा. बाबुराम भट्टराईका विषयमा के भन्न सकिन्छ भने उनी घर बनाउने जान्ने तर, घर चलाउन नजान्ने रहेछन्। उनले राम्रो बनाउन सक्छन्। तर चलाउन सक्दैनन्। तर अब बाबुरामले बनाउने र उपेन्द्र यादवले राम्रोसँग चलाउने हो भने बाबुराम र उपेन्द्रबीचको राजनीतिक समिकरण सफल हुनेछ। त्यसो भयो भने नवगठित समाजवादी पार्टी तेस्रो शक्तिका रुपमा आउन सक्छ।
एउटा क्षेत्रीय राजनीतिक दलका रुपमा उदायको फोरम क्षेत्रीय र जातीय मुद्दा उठाएर यहाँसम्म आउँदा धेरै दललाई आफूमा समाहित गरेर एउटा राष्ट्रिय दलको रुपमा स्थापित भएको छ। र, पछिल्लो समय डा. बाबुराम भट्टराईलाईसँग समेत एकता गरेर आफ्नो राजनीतिक उचाइ झन बढाएका छन्।
बाबुराम भट्टराई जस्तो कुशल आर्किटेक र राजनीतिज्ञसँग एकता गरेर उपेन्द्र यादवले राम्रो सुरुवात गरेका छन्। यो एकताबाट तत्काललाई बाबुरामलाई लाभ देखिएपनि दूरगामी लाभ भने उपेन्द्र यादवलाई हुनेछ। समग्रमा सही दिशा लिएर लोकतान्त्रिक भएर राष्ट्रिय रुपमा राजनीतिका स्रोत जनतालाई विश्वासलाई लिएर अगाडि बढ्यो भने समाजवादी पार्टी वैकल्पिक शक्ति हुनसक्छ।
डा. बाबुराम भट्टराईका विषयमा के भन्न सकिन्छ भने उनी घर बनाउने जान्ने तर, घर चलाउन नजान्ने रहेछन्। उनले राम्रो बनाउन सक्छन्। तर चलाउन सक्दैनन्। तर अब बाबुरामले बनाउने र उपेन्द्र यादवले राम्रोसँग चलाउने हो भने बाबुराम र उपेन्द्रबीचको राजनीतिक समिकरण सफल हुनेछ
मुख्य कुरा सिद्धान्त र जनविश्वास हो। सही सिद्धान्त अलम्बन गर्न सक्यो भने जनताले विश्वास नगर्नुपर्ने कारण छैन। लोकतान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनबाट राजनीति सिकेर संगठनको मुल धारमा पुगेका नेता नेता समाजवादी पार्टीमा छन्। उनीहरुले आफ्नो उमेरको अनुभवसमेतलाई सिद्धान्त बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जनतलाई आफ्नो विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सके भने दश वर्षभित्रै मुलुकको राजनीतिक वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छ।
नेपालमा राजनीतिक दल विभाजन गर्नु नियति बनिसकेको छ। विदेशीका दुई चार पैसा पयो भने उनीहरुले भने अनुसार नै पार्टी विभाजन गर्ने र विदेशीका सल्लाहमा पार्टी जोड्ने विषय नेपालको सन्र्दभमा आम विषय भइसकेको छ।
पार्टी नेताकाबीचमा सामान्य मतमतान्तर हुँदैमा अर्को पार्टी प्रवेश गर्ने यस्ता कुराले नेपालको राजनीतिक धेरै बिग्रिएको छ। तर पछिल्लो समय नेताहरु खारिँदै आएका छन्। उनीहरुले आफूभित्र विवाद वा विग्रह आयो भने मुलुकमा अर्को शक्तिको हातमा मुलुक जान्छ भन्ने नेताहरुमा चिन्ता देखिन्छ। त्यसकारण अब दलहरुमा धेरै टुटफुट हुँदैन की भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
नयाँ शक्ति र फोरमबीचको एकीकरणले सशक्त संगठन बनाउन र विचार र सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न र जनताको विश्वास आर्जन गर्न सत्तामा टाँसिरहने र सत्ताको स्वाद दिइरहने कुराले प्रभावित पार्न सक्छ। सत्ता छोडेर निश्वार्थ ढंगले मुलुक र जनताकालागि राजनीति गर्ने हो भने समाजवादी पार्टीले राम्रै गर्न सक्छन्।
त्यसो हो भने अहिलेका सरकारमा बसेका मानिसको दुई तिहाईको दम्भ पनि टुट्न सक्छ। विगतमा आफ्ना मागलाई निरन्तरता दिने र जनताकाबीचमा जाने हो भने यो दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ ‘स्टेप डाउन’ हुनसक्छ। त्यतिमात्रै होइन, ठाउँ खोजेर बसेका प्रचण्ड र माधव नेपालजस्ता नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको बोली व्यवहार र असष्णिुताले दुई तिहाइ गुम्यो, एकतामा बिग्रह आयो, यसले मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने हुनसक्छ त्यसकारण नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक छ भनेर अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ। त्यसो भयो भने पूर्व शर्त अनुसार साढे दुई वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन होला वा सत्ताधारी शक्तिमा बिग्रह आउला।
यदि त्यसो भयो भने बाबुराम भट्टराईले बनाउन खोजेको घर बन्ने र त्यो घर सही ढंगले संचालन गर्ने उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठको जिम्ममा समाजवादी पार्टी मुलुकको दोस्रो शक्ति पनि बन्न सक्छ। राजनीतिमा असंभव भन्ने केही पनि हुँदैन। यी सबै संभावनाका कुरा हुन्।
भारतको चुनावले दिने परिणाम र त्यो परिणामपछि आउने नेतृत्वको असर पनि नेपाली राजनीतिमा पर्नसक्छ। हिजो जुन संख्यामा लोकसभा सदस्यको संख्या पाएर सरकारको नेतृत्व गरेका नरेन्द्र मोदी अब त्यसै प्रकारको जनताको समर्थन नरहे अर्को मान्छे तयार होस म पछाडि बसेर सहयोग गर्छु भनेर पछि हट्न सक्ने संभावना पनि छ।
अर्को अहिले दिएको मत जे जस्तो होस त्यो सरकार बनाउनकै लागि दिएको हो र अहिल्लो कार्यकालमा भएका कमिकमजोरीलाई यो कार्यकालमा सुधार गरेर अगाडि बढ्छु भनेर फेरि मोदी नै प्रधानमन्त्री बन्ने र छिमेकीसँगको नीतिका विषयमा उनले परिमार्जन गरेर नयाँ ढंगले नेपाल नीति तय गरेभने त्यसलाई साथ दिन चीन अमेरिका पनि तयार हुने र नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ परिवर्तन आउन सक्छ। नयाँ शक्ति र फोरमको समिकरण एउटा सम्भावनाको स्रोस हुन सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।